SAWIRRO: Xeerka Bulshada oo lagu soo bandhigay laguna ayiday magaalada Jowhar | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA SAWIRRO: Xeerka Bulshada oo lagu soo bandhigay laguna ayiday magaalada Jowhar
SAWIRRO: Xeerka Bulshada oo lagu soo bandhigay laguna ayiday magaalada Jowhar
Munaasabad lagu soo bandhigayay laguna ayidayay xeerka Bulshada Jowhar ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle.
Madasha ayaa waxaa ka soo qeybgalay mas’uuliyiin ka socotay maamulka degmada Jowhar, Maxkamada, ciidamada Booliska,culumaa’udiin,duubabka dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa loogaga hadlay Xeerka Bulshada Jowhar.
Ugu horeyntii waxaa madasha ka hadlay Mahad Salaad Jaamac oo ah wakiilka hay’ada Danish Demining Group “DBG”.
“Dib u habeyn ayaa lagu sameeyay waxaa la waafijiyay shareecada Islaamka waxaana ka qeybgalay culumaa’udiinka iyo duubabka dhaqanka.”ayuu yiri Mahad Salaad Jaamac oo
Sidoo kale waxaa munaasabadan ka hadlay qaar ka mid ah culumaa’udiinka magaalada Jowhar iyo duubabka dhaqanka.
Axmed Colow Beerey oo ah guddoomiyaha Duubab Plus ayaa sheegay in xeerka bulshada uu yahay mid waafaqasan shareecada Islaamka isla markaana loo baahan yahay in bulshada degmada ay ku dhaqanto.
Guddoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Muqtaar oo munaasabadan ka hadlay ayaa soo dhoweeyay xeerka bulshada waxana uu sheegay maamulka degmada uu marwalba soo dhoweynayo wixii wanaagsan oo ay bulshadu ku heshiiso.
Ugu dambeyntii waxaa madasha ka hadlay kusimaha guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe ahna guddoomiye ku xigeenka arrimaha siyaasada Maxamed Cabdi Sheekh waxana uu ugu baaqay bulshada degmada Jowhar inay dhaqan geliyaan Xeerka Bulshada degmada Jowhar.
Xeerkan ayaa ah mid aymaalgelisay hay’ada DFID isla markaana ay hirgelisay Danish Demining Group “DBG”waxana uu ka hadlayaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin dilka,dhaca,kufsiga iyoqoddobo kale.